Phawula: Ukususela nge-20 ka-Agasti 2020, uAirbnb wazisa ukuba akazivumeli iipati namatheko enziwa kwizindlu zika-Airbnb emhlabeni wonke, waza wabeka nomda wabantu abanokuhlala babayi-16, nto leyo ehambisana neepolisi zentsapho yethu. Iipati azizukuvumeleka qho kubhukishwa kuAirbnb kwixesha elizayo, ibe ziza kuhlala zingavumelekanga side senze esinye isaziso kwakhona.
Imilinganiselo Yentsapho yethu ayiwavumeli amalungu Entsapho yakwa-Airbnb ukuba enze into ephazamisayo kwingingqi yawo. Ababuki zindwendwe neendwendwe banokuyifikelela le milinganiselo ngokuqinisekisa ukuba bayavumelana ngezinto ezilindelekileyo kwimicimbi eyenziwa kwizindlu. Ngoxa sikholelwa ukuba iindwendwe ezininzi ziyathobela, senze ipolisi yethu Yeepati Namatheko ukuze sinikezele ngokhokelo olucacileyo ngento esiyilindeleyo kumntu wonke. Kude kuphindwe kwaziswe, le polisi ayikuvumeli:
Ukongeza ekuqiniseni imithetho yethu engeepati, sisebenzela ekubeni nobuchwephetshe obubona umngcipheko obuza kusinceda ukunqanda iipati eziphazamisayo ngaphambi kokuba ziqale.
Ukungenelela xa kukho ipati engavumelekanga
Ukunciphisa inani leepati ezingavumelekanga ezenziwa ezindlini bekusoloko kuyinto ephambili kuAirbnb. Sithatha amanyathelo ukuxhasa uhambo olukhuselekileyo nolunenkathalo. Kuba singazivumeli iipati emhlabeni wonke, sisenokukuvala ukubhukisha okuthile esigqibe ekubeni kusemngciphekweni ophezulu wokuba neepati ezingavumelekanga.
Ngokuhambiselana nale polisi, Ababuki Zindwendwe abafanele benze kubekho umdla wokwenza iipati namatheko aphazamisayo kwizindlu zabo ngokuthi izindlu zabo zizilungele iipati okanye amatheko. Ngokufanayo, Ababuki Zindwendwe abafanele bathi izindlu zabo zikulungele ukudibana kwabantu abangaphezulu kwabayi-16.
Into omele uyazi ukuba ummelwane wakho nguMbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb
Sikhuthaza ababuki zindwendwe ukuba bacingisise kakuhle ngezinto ekufuneka bazenze. Ukubuka iindwendwe kufuna uzibophelele kubamelwane nasek…
Le migangatho zizinto ezifunekayo ezidityanisiweyo ezingumlinganiselo ekufuneka ufikelelwe weendawo ezenziwe kakuhle naBabuki Zindwendwe aba…